Ku Dhowaad Sedax Kun Muslimiin Ah oo Lagu Dilay Xasuuq Ay Geysteen Ciidamada Dowladda Baarma.
Wednesday August 30, 2017 - 10:27:44 in Wararka by Super Admin
Ciidamada Buundiyiinta wadanka Baarma ayaa Xasuuq wadareed naxdin leh ugeystay kumanaan shacab muslimiin ah oo ku dhaqan gobolka Aaraakaan ee wadankaasi.
Wararka ka imaanaya Baarma ayaa sheegaya in xasuuq Jamaaci ah uu ka socdo magaalooyin iyo tuulooyin ay deganyihiin muslimiinta Rohingga kuwaas oo ah aqaliyad wajahaysa xasuuqa qarniga ee caalamka.
Wakaaladda Wararka Aaraakaan ayaa baahisay in dad kabadan 2,000 oo qof muslimiin ah lagu dilay Baarma sedax maalmood gudahood walina ciidamada Melleteriga iyo Booliska Baarma waxay wadaan xasuuq aan kala sooc laheyn.
Haweenay lagu magacaabo Aneyta oo Afhayeenad u ah Gole ay leeyihiin muslimiinta Dibadda Joogga Baarma ayaa wakaaladda wararka Anaadool u sheegtay in dadka dhintay ay u dhaxeeyaan laba kun illaa iyo sedax kun waxaana jira warar sheegaya in xasuuqu uu yahay mid sedax geesood ah oo ay geysanayaan ciidamada Booliska, Melleteriga iyo Buudiyiin xagjir ah oo dowladdu ay hubeysay.
Weeraro aad u xooggan oo ciidamada dowladda Baarma qaadeen maalmihii axadda iyo isniinta ayaa la sheegay in dad ka badan 100-kun oo qof lagu barakiciyay, wararka ayaa intaas ku daraya in dad ku dhow laba kun oo ruux ay ku xanibanyihiin xuduudda ay wadaagaan Bangaladhesh iyo Baarma.
Xasuuqan waxashnimada ah ee lagu haayo muslimiinta Baarma kunool wuxuu imaanayaa xilli xaalad adag ay wajahayaan barakacayaasha Muslimiinta Rohinga ee ku sugan wadamo dhaca Koonfurta iyo bartamaha qaaradda Asia.